War Deg Deg: Tirinta Codadka Doorashada Gudoomiye kuxigeenka 2-aad oo dhamaatay (Sida loo kala horeeyo ) - iftineducation.com
aadan21 / January 11, 2017
iftineducation.com – Waxaa iyana hada soo dhamaatay tirinta codadka Doorashada Gudoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay ku tartamayaan 10-musharax oo katirsan Xildhibaanada Baarlamaanka.
Natiijada horu dhaca ah ay Heshay Shabakada Allbanaadir.com ayaa iyana tilmaameysa in tartankan uu yahay mid aad u adag ayna Xildhibaanada qaar aad isugu dhaw yihiin codadka Xildhibaanada dhiibteen.
Doorashadan ayaa iyana loo gudbi doonaa wareeg kale maadaama uusan jirin Musharax helay codadkii loo baahnaa, waxaana suurto gal ah in wareeg sedexaad loo gudbo hadii aysan Musharxiinta qaar aysan tanaasulin.
Musharaxinta ayaana Codadka u kala helay sida tan “
1-Mahad Cabdalla Cawad, 71-Cod
2–Cabdulkadir Sh. Cali Baqdaadi 51-
3– Cabdiraxmaan Aden Ibarhim Ibbi 36-Cod
4-Burhaan Aden Cumar, 26-Cod
5-Cabdulahi Godax Barre 18-Cod
6-Cilmi Maxamed Nuur 12-cod
9-Xuseen Cabdi Cilmi, 14-Cod
8-Cabdiweli Maxamed Qanyare 12- Cod
9-Maryan Axmed Harun. 10-Cod
10-Cabdulahi Xusen Cali 8-Cod
Ilmo la’aanta dumarka iyo ragga oo ku badatay koonfurta Yurub ayay sheegtay warbixin cusub